Bit By Bit - အပြေးစမ်းသပ်ချက် - 4.5.2 သင့်ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှု Build
လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်၏ထိပ်ပေါ်မှာစမ်းသပ်ချက် overlaying အပြင်, သငျသညျမြားကိုလညျးသင့်ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီချဉ်းကပ်မှု၏အဓိကအားသာချက်ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်၏ သင်စမ်းသပ်မှုတည်ဆောက်ခြင်းလျှင်, သင်ချင်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကုသမှုကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကား bespoke စမ်းသပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်စမ်းသပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းသီအိုရီကိုစမ်းသပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးပေးနိုင်သည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှုတည်ဆောက်ခြင်း၏အဓိကအားနည်းချက်များကြောင့်စျေးကြီးဖြစ်နှင့်သင်ဖန်တီးနိုင်ကြသည်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုသဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်စနစ်၏သရုပ်မှန်ရှိသည်မဟုတ်အံ့သောငှါနိုငျသောဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှုတည်ဆောက်ခြင်းသုတေသီများကလည်းသင်တန်းသားများကိုစုဆောင်းများအတွက်မဟာဗျူဟာရှိရမည်။ လက်ရှိစနစ်များအတွက်အလုပ်လုပ်နေသည့်အခါသုတေသီများမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သူတို့ရဲ့သင်တန်းသားများအတွက်စမ်းသပ်ချက်ယူလာကြပါတယ်။ သုတေသီများဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှုတည်ဆောက်သောအခါမူကား, သူတို့ကမှသင်တန်းသားများကိုရောက်စေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ထိုကဲ့သို့သောအမေဇုံစက်မှု Turk (MTurk) အဖြစ်န်ဆောင်မှုကိုသူတို့စမ်းသပ်ချက်မှသင်တန်းသားများကိုရောက်စေဖို့အဆင်ပြေလမ်းနှင့်အတူသုတေသီများပေးနိုင်ပါသည်။
စိတ္တဇသီအိုရီစမ်းသပ်ဘို့ bespoke ပတ်ဝန်းကျင်မှာ၏သီလသရုပ်ဖော်ကြောင်းဥပမာတစျခု Gregory Huber, ရှေဟေးလ်နှင့်ဂါဗြေလ Lenz အားဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါတယ် (2012) ။ ဒါဟာစမ်းသပ်မှုဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်မှုစနစ်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သောလက်တွေ့ကျတဲ့န့်အသတ်စူးစမ်း။ အစောပိုင်းကအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ပွဲ Non-စမ်းသပ်လေ့လာမှုများမဲဆန္ဒရှင်တိကျစွာလက်ရှိနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကဲဖြတ်နိုင်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအကြံပြုသည်။ အထူးသဖြင့်, မဲဆန္ဒရှင်သုံးဘက်လိုက်မှုကနေဆငျးရဲခံရဖို့ပေါ်လာ: (1) သူတို့မကြာသေးမီထက်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အာရုံစိုက်နေကြသည်; (2) သူတို့အပြောအဆို, ဘောင်များနှင့်စျေးကွက်များကခြယ်လှယ်နိုင်ပါတယ်; (3) သူတို့ထိုကဲ့သို့သောဒေသခံအားကစားအသင်းများ၏အောင်မြင်မှုနှင့်ရာသီဥတုအဖြစ်လက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်မသက်ဆိုင်သောဖြစ်ရပ်များ, ကလွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။ ထိုအစောပိုငျးကလေ့လာမှုများအတွက်, သို့သော်, ဒါကြောင့်ကိုမှန်ကန်ရှုပ်ထွေးရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်ဖြစ်ပျက်သမျှသောအခြားပစ္စည်းပစ္စယဤအချက်များမဆိုခွဲထုတ်ရန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, Huber နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များခွဲထုတ်နိုင်ရန်အတွက်အလွန်ရိုးရှင်းသောမဲပေးပတ်ဝန်းကျင် created, ပြီးတော့စမ်းသပ်ဤသုံးပါးဖြစ်နိုင်ခြေဘက်လိုက်မှု၏အသီးအသီးလေ့လာတယျ။
ငါစမ်းသပ် Set-up ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြရန်ကြောင့်အလွန်အတုအသံသွားပေမယ့်သရုပ်မှန်ဓာတ်ခွဲခန်း-စတိုင်စမ်းသပ်ချက်အတွက်ရည်မှန်းချက်မဟုတျကွောငျးကိုအောကျမေ့နေသည်။ ယင်းအစားအဆိုပါရည်မှန်းချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသင်လေ့လာဖို့ကြိုးစားနေသောဖြစ်စဉ်ကိုခွဲထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်, ဤတင်းကျပ်စွာအထီးကျန်မှုတွေပိုပြီးသရုပ်မှန်နှင့်အတူလေ့လာမှုများအတွက်တခါတရံတွင်မဖြစ်နိုင်ပါ (Falk and Heckman 2009) ။ ထို့ပြင်ဒီအထူးသဖြင့်အမှု၌, သုတေသီများမဲဆန္ဒရှင်ထိရောက်စွာထို့နောက်သူတို့တစ်တွေပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျပိုမိုရှုပ်ထွေး setting ကိုအတွက်ထိုသို့ပြုမှနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကြသည်မဟုတ်, ဒီအလွန်အမင်းရိုးရှင်းသော setting ကိုအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်မနိုင်လျှင်စောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။
Huber နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကသင်တန်းသားများကိုစုဆောင်းဖို့ MTurk ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးပါဝင်သူအသိပေးသဘောတူညီခကျြပေးကာတိုတောင်းသောစမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီးပြီးတာနဲ့သူမသည်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံသို့ကူးပြောင်းနိုင်တိုကင်ဝင်ငွေမှတစ်ဦး 32-ပတ်ပတ်လည်ဂိမ်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့ကွောငျးကြားပြောလေ၏။ ဂိမ်းရဲ့အစမှာတစ်ခုချင်းစီပါဝင်သူသူမရဲ့အခမဲ့တိုကင်တစ်ခုစီကိုလှည့်လည်ပေးနှင့်အချို့သောခွဲဝေအခြားသူတွေထက်ပိုပြီးရက်ရောခဲ့မယ်လို့ထားတဲ့ "ခွဲဝေ" တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းကြားပြောလေ၏။ ထို့ပြင်တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူလည်းသူမကသူမ၏ခွဲဝေထားရန်ဖြစ်စေခြင်းသို့မဟုတ်ဂိမ်း၏ 16 ကြိမ်အပြီးအသစ်တခုတဦးတည်းတာဝန်ပေးအပ်ခံရမယ့်အခွင့်အလမ်းရှိလိမ့်မယ်လို့ကြားပြောလေ၏။ သငျသညျ Huber နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက '' သုတေသနရည်မှန်းချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိကျွမ်းသောအရာကိုပေးသနား, သင်ခွဲဝေအစိုးရကိုကိုယ်စားပြုနှင့်ဤရွေးချယ်မှုတစ်ခုရွေးကောက်ပွဲကိုကိုယ်စားပြုတယ်, ဒါပေမယ့်ပါဝင်သူသုတေသန၏အထွေထွေဂိုးသတိထားမိကြဘူးကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ စုစုပေါင်း Huber နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့် ပတ်သက်. ရှစ်မိနစ်ကိုယူမယ့်လုပ်ငန်းတာဝန်ဘို့အကြောင်းကို $ 1.25 ပေးချေခဲ့ကြတဲ့သူတွေအကြောင်း 4000 သင်တန်းသားများကိုစုဆောင်း။
အစောပိုင်းသုတေသနပြုရာမှတွေ့ရှိချက်တွေထဲကမဲဆန္ဒရှင်တွေထိုကဲ့သို့သောဒေသခံအားကစားအသင်းများ၏အောင်မြင်မှုနှင့်ရာသီဥတုအဖြစ်သူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကျော်လွန်ရှင်းလင်းစွာဖြစ်ကြောင်းရလဒ်များများအတွက်ကလက်ရှိသမ္မတဆုချခြင်းနှင့်စစ်ကြောတော်မူခဲ့ကွောငျးသတိရပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုမဲပေးသင်တန်းသားများကိုသူတို့ရဲ့ setting ကိုအတွက်သက်သက်သာကျပန်းဖြစ်ရပ်များကလွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့, Huber နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကသူတို့စမ်းသပ်စနစ်တစ်ထီကဆက်ပြောသည်။ (ညာခွဲဝေချထားအစားထိုးရန်ဖို့အခွင့်အလမ်းမတိုင်မီဆိုလိုသည်မှာ,) 8 ပတ်ပတ်လည်သို့မဟုတ် 16 ပတ်ပတ်လည်ဖြစ်စေမှာသင်တန်းသားများကိုကျပန်းအချို့သော 5000 အချက်များအနိုင်ရခဲ့တဲ့ထီ၌ထားကြ၏အချို့ပါ0င်အချက်များဖြင့်အနိုင်ရခဲ့သည်နှင့်အချို့သော 5000 ရမှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဤသည်ထီနိုင်ငံရေးသမားများ၏စွမ်းဆောင်ရည်၏လွတ်လပ်သောကြောင်းကောင်းမကောင်းသတင်းတူတဲ့ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းသားများကိုအတိအလင်းအဆိုပါထီကိုသူတို့ခွဲဝေများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မသက်ဆိုင်သောခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်သော်လည်းအဆိုပါထီ၏ရလဒ်ကိုနေဆဲသင်တန်းသားများကို '' ဆုံးဖြတ်ချက်များထိခိုက်။ အဆိုပါထီမှအကြိုးတဲ့သူသင်တန်းသားများကို၎င်းတို့၏ခွဲဝေစောင့်ရှောက်ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်, ထိုထီအစားထိုးဆုံးဖြတ်ချက်-ထက်ကပတ်ပတ်လည် 8 မှာဖြစ်ပျက်လာသောအခါ (ပုံ 4.15) မတိုင်မီပတ်ပတ်လည် 16-ညာဘက်မှာရှိတဲ့ဖြစ်ပျက်သည့်အခါဤအကြိုးသကျရောအားကောင်းခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည်, စက္ကူအတွက်အခြားစမ်းသပ်ချက်သူတို့နှင့်အတူပင်ရိုးရှင်းသော setting ကိုအတွက်မဲဆန္ဒရှင်, မဲဆန္ဒရှင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအကြောင်းကိုအနာဂတ်သုတေသနထိခိုက်စေတဲ့ရလဒ်အခက်အခဲပညာရှိသဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချရှိသည်ကောက်ချက်ချ Huber နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကဦးဆောင် (Healy and Malhotra 2013) ။ Huber နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏စမ်းသပ်မှု MTurk တိကျစွာအလွန်တိကျတဲ့သီအိုရီကိုစမ်းသပ်နိုင်ရန်အတွက်ဓာတ်ခွဲခန်း-စတိုင်စမ်းသပ်ချက်အဘို့အသင်တန်းသားများကိုစုဆောင်းဖို့အသုံးပွုနိုငျကွောငျးဖျောပွ။ ဒါဟာအစသင့်ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်ပတ်ဝန်းကျင်တည်ဆောက်ခြင်း၏တန်ဖိုးကိုပြသထားတယ်: ဤတူညီတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုအခြား setting ကိုအတွက်ဒါသန့်ရှင်းမှုအထီးကျန်ခဲ့နိုင်ပုံကိုစိတ်ကူးဖို့ခဲယဉ်းသည်။
ပုံ 4,15: ကနေရလာဒ် Huber, Hill, and Lenz (2012) ။ အဆိုပါထီမှအကြိုးတဲ့သူသင်တန်းသားများကို၎င်းတို့၏ခွဲဝေထိန်းသိမ်းထားဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်, ထိုထီအစားထိုးဆုံးဖြတ်ချက်-ထက်ကနေ Adapted ပတ်ပတ်လည် 8. အတွက်ဖြစ်ပျက်သည့်အခါမရောက်မီပတ်ပတ်လည် 16-ညာဘက်မှာရှိတဲ့ဖြစ်ပျက်သည့်အခါဤအကြိုးသကျရောအားကောင်းခဲ့ Huber, Hill, and Lenz (2012) , ပုံ5။
ဓာတ်ခွဲခန်းကဲ့သို့စမ်းသပ်ချက်တည်ဆောက်ခြင်းအပြင်, သုတေသီများလည်းပိုပြီးလယ်ကွင်း-ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ကြောင်းစမ်းသပ်ချက်တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Centola (2010) အပြုအမူများပြန့်နှံ့အပေါ်လူမှုကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာမယ့်ဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်းသပ်မှုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့သုတေသနမေးခွန်းတစ်ခုကိုကွဲပြားခြားနားသောလူမှုကွန်ယက်အဆောက်အဦများရှိခဲ့ပေမယ့်မဟုတ်ရင်ချွတ်စွပ်အရွယ်အစားဖြစ်ကြောင်းလူဦးရေအတွက်ပြန့်ပွားတူညီတဲ့အပြုအမူကိုစောငျ့ရှောကျဖို့သူ့ကိုလိုအပ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာ bespoke, ထုံးစံ-built စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူရှိ၏။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, Centola တစ် web-based ကျန်းမာရေးအသိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
Centola ကျန်းမာရေးကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာကြော်ငြာမှတဆင့်အကြောင်းကို 1500 သင်တန်းသားများကိုစုဆောင်း။ သင်တန်းသားများကိုအွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်း-သောကျန်းမာရေးလူနေမှုပုံစံကိုခေါ်ခဲ့သည်မှာရောက်တုန်းက Network-သူတို့အသိပေးသဘောတူညီခကျြပေးပြီးတော့ "ကနျြးမာသူငယ်ချင်းများ။ " တာဝန်ကျသောကြောင့် Centola သည်ဤကျန်းမာရေးသူငယ်ချင်းများတာဝန်ပေးအပ်လမ်းသူအတွက်အတူတကွကွဲပြားခြားနားသောလူမှုကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းပုံဖှဲ့နိုငျခဲ့တယျ ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများ။ အခြားအုပ်စုများ (ဆက်သွယ်မှုကိုပိုပြီးပြည်တွင်းဖြစ်သိပ်သည်းများမှာဘယ်မှာ) ကွန်ရက်များပြွတ်ရှိသည်ဟုတညျဆောကျနကွေစဉျအချို့သောအုပ်စုများ, (လူတိုင်းချိတ်ဆက်ခံရဖို့အညီအမျှဖွယ်ရှိရှိရာ) ကျပန်းကွန်ရက်များရှိသည်ဖို့ built ခဲ့ကြသည်။ အပိုဆောင်းကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူသစ်တစ်ခုက်ဘ်ဆိုက်အဘို့မှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့အခွင့်အလမ်း: ထို့နောက် Centola တစ်ခုချင်းစီကို network ထဲသို့အသစ်တခုအပြုအမူမိတ်ဆက်ပေးသည်။ မည်သူမဆိုဤ site အသစ်တက်သည်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့အခါတိုင်းသူမရဲ့ကျန်းမာရေးသူငယ်ချင်းများအပေါငျးတို့သညျဤအပြုအမူကြေညာအီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Centola, ဒီသစ်ကိုက်ဘ်ဆိုက်-ပျံ့နှံ့သီးပြွတ်ကွန်ယက်တွင်ထပ်မံနှင့်ပိုမြန်သည့်ကျပန်းကွန်ယက်ထက်တက်သည်အပြုအမူ-လက်မှတ်ထိုးတချို့တည်ဆဲသီအိုရီဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တွေ့ရှိချက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ယေဘုယျအားသင့်ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှုတည်ဆောက်ခြင်းကိုသင်ပိုပြီးထိန်းချုပ်ပေးသည်; သင်လေ့လာချင်သောအရာကိုခွဲထုတ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တည်ဆောက်ရန်သင့်အားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာကိုယ့်ဖော်ပြထားကြပြီနှစ်ခုစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုပြီးသားရှိပြီးသားပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြနိုင်ပုံကိုစိတ်ကူးဖို့ခဲယဉ်းသည်။ ထို့ပြင်သင့်ကိုယ်ပိုင်စနစ်ကတည်ဆောက်ခြင်းရှိပြီးသားစနစ်တွေအတွက်စမ်းသပ်ပတ်ပတ်လည်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများလျော့နည်းစေပါသည်။ စုဆောင်းရေးသင်တန်းသားများနှင့်သရုပ်မှန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ: သင်သင့်ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ, သို့သော်, သငျသညျဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်များတွင်ကြုံတွေ့ကြသည်ပြဿနာတွေအများအပြားသို့ပြေး။ ဤဥပမာကိုပြသသည်အတိုင်း, စမ်းသပ်ချက် (ထိုကဲ့သို့သောအားဖြင့်မဲပေး၏လေ့လာမှုအဖြစ်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကနေအထိနိုငျသညျ, ပေမယ့်တစ်ဦးကနောက်ဆုံးကျဘက်ကို, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှုတည်ဆောက်ခြင်းအကုန်အကျနှင့်အချိန်-စားသုံးဖြစ်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ Huber, Hill, and Lenz (2012) ) (ထိုကဲ့သို့သောကွန်ရက်များကဘယ်လိုကူးစက်များ၏လေ့လာမှုအဖြစ်အတော်လေးရှုပ်ထွေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ Centola (2010) ) ။